आगलागी – नेपाल रफ्तार
राप्ती ५ को एक घरमा आगलागी, नगदसहित सबै जल्यो
भण्डारा : राप्ती नगरपालिका वडा नं ५ को एक घरमा आगलागी भएको छ । मंगलबार बिहान २ बजे भाइजी झाको घरमा आगो लागेको हो । विद्युत सर्ट भई आगो लागेको हुनसक्ने प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीबाट नगद २५ हजारसहित पुर्ण रुपमा घर र सामान जलेको छ । आफुले काम गरि ल्याएको नगदसहित सम्पुर्ण सामान नष्ट भएको पिडितले बताए । खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत सबै जलेपछि खाना र बस्नको समस्या परेको पिडितको गुनासो छ ।
भारतको पुणेमा केमिकल उद्योगमा आगलागी, १८ मजदुरको मृत्यु
काठमाडौँ : भारतको महाराष्ट्र राज्यको पुणेस्थित एउटा केमिकल कारखानामा आगलागी भएको छ । आगलागी हुँदा कम्तीमा १८ मजदुरको मृत्यु भएको छ । ३७ मजदुर कार्यरत रहँदा सोमबार बेलुकी भएको आगलागीमा अझै केही बेपत्ता छन् । हराएका मजदुरहरुको खोजी भइरहेको भारतको फायर ब्रिगेड विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । मोदीले घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई २ लाख तथा घाइतेका परिवारलाई ५० हजारका दरले राहत दिने घो...
आगलागीमा तीन लाख क्षति
इनरुवा, (रासस) : सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा गएराति भएको आगलागीमा रु तीन लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ । स्थानीय माई स्न्याक्स एन्ड फुड्स प्रालिमा भएको आगलागीमा तीन लाख ५० हजार बराबरको क्षति भएको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीलाई स्थानीयवासी, प्रहरी र इनरुवा नगरपालिकाबाट गएको वारुणयन्त्रले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अर्बपति विनोद चौधरीको उद्योगमा किन पटक–पटक आगो लाग्छ ?
काठमाडौँ : देशमा धेरै व्यापारिक घरानका उद्योगहरू छन् । ती उद्योगमा बिरलै आगलागीका घटना हुने गरेका छन् । तर, चौधरीका उद्योगमा आगलागीको श्रृङ्खला दोहोरिनु संयोग मात्रै हुन् वा नियोजित हो भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । विं.सं. २०६९ असोज २८ गते काठमाडौँको सतुंगलमा रहेको सिजी इम्पेक्स, इओएल प्रा.लि. र सिजी इलेक्ट्रोनिक्समा भएको आगलागीको घटना अहिलेसम्म विवादको केन्द्रमा रहेको छ । बीमाबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने उद्देश्यले सो आगलागी गरिएको भन्दै त्यसबेला विवाद भएको थियो । जसका कारण चाै...
किमाथाङ्का, (रासस) : सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–५ च्याङरिङमा आगलागीमा परेर किरियापुत्री बसेका दुई दम्पतीको मृत्यु भएको छ । गए राति आगलागीमा परेर किरियापुत्री बसेका ४७ वर्षीय राजेन्द्रबाबु दाहाल र ४४ वर्षीया कमला भण्डारी दाहालको मृत्यु भएको वडा नं ५ का वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद दाहाल जानकारी दिनुभयो । सात दिनअघि बित्नु भएका ८४ वर्षीय बुबा कृष्णप्रसाद दाहालको काजकिरियाका लागि बस्नुभएका दम्पतीको गए राति आफ्नै घरमा आगलागीमा परेर मृत्यु भएको हो । आगलागीमा परेर गम्भीर घाइते भएका राजे...
चौधरी उद्योग परिसरमा पाँच घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा
कावासोती, (रासस) : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको देवचुली नगरपालिकास्थित चौधरी उद्योग परिसरमा लागेका आगो नियन्त्रणमा आएको छ । आज बिहान उद्योग परिसरभित्रको सिजी बु्रअरीमा लागेको आगो करीब पाँच घण्टामा पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आएको हो । नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम र चितवनका सात दमकल, नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरीसहितको प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले बताउनुभयो । सिजी बु्रअरीको गोदाम घरमा लागेको...
भारतीय एक अस्पतालमा आगलागी, दुई नर्ससहित १८ जनाको मृत्यु
अहमदावाद : भारतको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा अस्पतालमा सेवारत दुई नर्ससहित कम्तीमा १६ कोभिड–१९ सङ्क्रमित विरामीको मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । एशियाली यस मुलुकमा सङ्क्रमण दर उच्च भएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा समस्या देखिइरहेका समय पश्चिमी राज्य गुजरातको भरुचको चार तलाको अस्पतालमा आगलागी भएको हो । स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान १ः०० बजै आगलागी हुँदा अस्पतालमा करिब ५० अन्य बिरामीहरू थिए । आगो केही समयपछि नियन्त्रणमा आएको थियो । स्थानीय प्रहरी अधिकारी राजेन्द्र...
शिवपुरी जंगलमा आगलागी, नेपाली सेना र प्रहरीद्वारा नियन्त्रणको प्रयास
काठमाडौं : शिवपुरी-नागर्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आगलागी भएको छ । बुधबार दिउँसो आगलागी भएपछि नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पुगेको छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि अहिले त्यहाँ नेपाली सेनाको दमकल पुगिसकेको छ, अन्य दमकल पनि जाँदैछन् । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले टोखामाथिको जंगलमा आगलागी भएको देखेपछि स्थानीयले खबर गरेका थिए । त्यसपछि आगो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । यसअघि २९ चैतमा पनि शिवपुरी-नागर्जुन जंगलमा आगलागी भएको थियो, न...
रोल्पामा भीषण आगलागी हुँदा ५० घर-गोठ जले, अझै ३० घर जोखिममा
रोल्पा : रोल्पामा आगलागी हुँदा एउटा गाउँ नै ध्वस्त भएको छ । मंगलबार साँझ सामुदायिक वनमा अचनाक लागेको आगोले त्रिवेणी गाउँपालिका वडा २ को पिराले ध्वस्त भएकाे हाे । आगलागीबाट ५० भन्दा बढी घर र गोठ जलेको त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयाे । उहाँका अनुसार सोमबारबाट सामुदायिक वनमा आगो लागेकाे थियाे । उक्त आगो निभाउन नसक्दा मंगलबार दिउसो बस्तीमा पसेकाे हाे । आगलागीबाट १२ गाइवस्तुसहित २० भन्दा बढी चौपाय, अन्न, लत्रता-कपडा सबै जलेको प्रशा...
टीकापुर : कैलालीको जानकी गाउँपालिका–६ जगतपुरस्थित कैलाशेश्वर सामुदायिक वनमा आइतबार दिउँसोदेखि भीषण आगलागी भएको छ । समूहका अध्यक्ष खडक शाहले लायकपुर मुक्त कमैया शिविर नजिकै सामुदायिक वन क्षेत्रमा आगलागी भएको जानकारी दिनुभयो । आगलागीबाट करोडौँको वन पैदावार नष्ट भएको छ । आगलागी नियन्त्रणका लागि टीकापुर र लम्की चुहा नगरपालिकाका दुई दमकल, दुई स्थानीय तह र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका ३ स्काभेटर, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय वासिन्दा र उपभोक्ता नियन्त्रणमा खटेका छन् ...